Repoblika Dominikana: Fahitalavitra niomerika amin’ny taona 2015 · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Andres Riveros
Voadika ny 14 Oktobra 2010 7:42 GMT
24 Septambra 2015 no vanin'andro nofidian'ny Ivontoerana Dominikana momba ny Fifandraisan-davitra (Indotel) hanaovana ny fifindràna tanteraka mankany amin'ny fahitalavitra niomerika, tetikasa efa eo an-dàlam-panatontosàna any amin'ireo firenena tahaka an'i Argentina, Costa Rica, Peru, Great Britain, Canada ary Afrika Atsimo sy ny maro hafa.
Hatramin'izao aloha dia firenena 15 no efa nahavita ny fifindràna tanteraka mankany amin'ny niomerika tsotra, endrika izay mampiasa ny karazana fampifintinana manova ny onja ho 1 sy 0 (“code binaire”), tsy vitan'ny hoe manatsara ny sary ihany izy io fa sady manome fanampim-panazavàna izay mampitombo ny traikefan'ny mpijery. Tsy voasembantsemban'ny toetr'andro, na ny elanelana mety hisy eo amin'ilay mpandray sy ny mpandefa onja ihany koa io.
Ny fiafaràn'ny vanim-potoanan'ny "analogue" tany Etazonia. Sary avy amin'i Stargazer95050.*
Ny Repoblika Dominikana dia anisan'ireo firenena marobe izay eo an-dàlam-pametrahana ny foto-drafitrasa niomerika, lasa olana rehefa nanambara ny vanin'andro hanaovany ny fifindràny azy manokana i Etazonia tamin'ny 2005, fantatra kokoa amin'ny hoe fahafatesan'ny “analogique”. Tamin'izany fotoana izany ny Komisiona Federaly momba ny Fifandraisana no nanapa-kevitra fa ny 17 Febroary 2009 dia tokony hifarana avokoa ny fandefasana amin'ny fomba “analogique” rehetra, nefa tsy nanomboka ny fiafaràn'ny “analogique” raha tsy tamin'ny 12 Jona 2009.
Raha niditra tao amin'ny tontolon'ny fahitalavitra niomerika i Etazonia, nandinika lalina ny olana ny Indotel niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana, ka nanao ny sehatra ara-dalàna sy ara-teknika. Mandritra izany ny taona roa farany teo dia natokana ho an'ny fandinihana ireo rafitra efatra am-perin'asa maneran-tany: ATSC (USA), ISDB-T (Japana), DVB-T (Eoropa) ary DMB-T/H (Sina). Manazava i Junior Hernández ao amin'ny Duarte 101 [ES]:
Herintaona mahery kely izay no nampidirana ny resaka fahitalavitra niomerika taty amin'ny firenentsika, noho ny faneken'ny Kongresin'ny Etazonia ny fanafoanana ny fandefasana ny “analogique” amin'ireo tambajotram-pahitalavitra.
Taorian'ny fihaonana ara-teknika, fivoriana ary andrana mifanesisesy nataon'ny fantsona 4 (CERTV), nanambara ny Indotel fa vita ihany ny fifanarahana amin'ny ho fampiasàna ny endrika tsotra ho an'ny fahitalavitra niomerika Dominikana. ATSC (Advanced Television Systems Committee – Komitin'ny Rafitra Fahitalavitra Avolenta), novoarin'ny orinasa iray tamin'ny taona 90 izay nikendry ny hamaritra ireo toetran'ny niomerika sy ny HD ho an'ny tsena Amerikana.
Satria eo ny hoe mandeha amin'ny NTCS ny fahitalavitra “analozika” any amin'ny Repoblika Dominikana amin'izao fotoana izao, izay natomboka ihany koa tany Etazonia, toa tsy mahagaga ihany raha ny ATSC no nofidiana ho an'ny fifindràna mankany amin'ny niomerika. Sady misy fomban-drazana goavana ara-teknolojia rahateo, sy fahatakàrana ireo drafitra iraisana ampiasaina any Etazonia, izay nofinidin'ny orinasa ao an-toerana, araka ny asehon'ny lalàna 407-10, ahitàna ilay fanapahan-kevitra.
Koa satria efa voafaritra ny drafitra iraisana, maro ireo fanantenam-bokatra eo amin'ireo mpanaraka ny teknolojia, nefa eo ihany koa ireo ahiahy momba ny ho fizotran'ny fifindràna, araka ny ambaran'ny SFadul ao amin'ny Choza Digital [ES]:
Hahaliana tokoa ny hiaina ity fifindràna ity, izay tsy mora sady tsy takatry ny rehetra tany Etazonia, satria tamin'ny taon-dasa, maro loatra ny olona manana fahitalavitra “analogique” (sady lehibe!) ka somary nanahirana ihany ny lojistika hametrahana ny fitaovana famadihana ho niomerika ho an'ireo mpanjifa. Tokony hampirisika ny fividianana fahitalavitra niomerika ny governementa mandritra ny 5 taona manaraka; satria raha mitohy mijanona ho toy izao ny tahan'ny fanekena azy ity, dia ho maro loatra ireo Dominikana hanana fahitalavitra antitra amin'ny 2015 .
Ankoatra an'i Etazonia, izay ahitàna taratra foana izany resaka izany any amin'ny haino aman-jery, na ny vohikalany manokana aza, tonga any amin'ny mpijery ihany ny vaovao momba ny fizotr'izany any amin'ny Repoblika Dominikana indraindray, indrindra rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe tapaka toa ny fanambaràna ny fifidianana ny hampiasa ny “ATSC standard”. Mampita izany tranga izany i Joan Guerrero ao amin'ny bilaoginy [ES]:
Tadidiko tsara tamin'ny nanomboka ny adihevitra momba ny rafitra tokony ho ampiasaintsika 12 volana lasa izay, ary nalahelo aho satria tsy afaka nahita vaovao betsabetsaka momba izany tany amin'ny haino aman-jery fototra.
Olana iray hafa mampanahy Dominikana maro koa ny vokatry ny fiovàna miala amin'ny “analogique” mankany amin'ny “niomerika”. Manazava tsara izany i Junior Hernández ao amin'ny lahatsoratra [ES] nosoratany ho an'ny Duarte 101 [ES] tamin'ny taon-dasa, raha nanomboka ireo dingana voalohany tamin'ny tetikasany ny Indotel.
… Na izany aza, ny fanànana fahitalavitra niomerika dia midika fanana fitaovana mifanaraka amin'izany karazana onja izany, na fampiasàna ilay fitaovana famadihana izay ahafahana manao izany, izay mitentina 10 000$ any ho any ny vidiny. Ndeha hojerena ny miseho amin'ny fianakaviana iray izay tsy maintsy miasa mafy hitadiavana 200$ na 300$ isan'andro ho an'ny sakafo, voatery hampiasa vola amin'ity fitaovana mba hanohizana hankafy ny iray amin'ireo haino aman-jery mampiala voly tena miasa be indrindra aty amin'ny firenentsika.
Sary avy amin'i StarGazer95050 ampiasaina eo ambany fiarovana Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0.
6 ora izayFanoherana